I-Salon Cottage (Ilungele Izinja) - I-Airbnb
I-Salon Cottage (Ilungele Izinja)
Le ndlu inomtsalane yindlu yeendwendwe ebekwe kufutshane nenye i-Airbnb, ejikelezwe ziicawe kunye nendawo eluhlaza enomtsalane. Uphantse waziva uthuthelwe kwidolophu yakudala yaseGeorgia ngeentsimbi zecawe ezikhalayo. Emva koko unokuba nohambo olufutshane oluthandekayo ukuya edolophini eBrunswick okanye kwindawo yokubhaka ejikeleze ikona. Imizuzu ukusuka eJekyll naseSt.Simons ukufikelela elunxwemeni. Ifakwe ifanitshala entsha kwaye iphumle kakhulu. Le ndawo iye yalungiswa ngokupheleleyo ngo-2021. Imibala epholileyo kunye nento oyifunayo xa ubaleka.
Ngaba ukhe wahlala kwisaluni endala? Nali ithuba lakho. USarah Hobbs umhlekazi wasekhaya wayenesaluni ebizwa ngokuba yiParagon Beauty Shop ebekwe kwisitalato sakwa-G kumbindi wedolophu yaseBrunswick. Wayefuna ukusebenza kufutshane nekhaya kwaye angabhatali irente ngoko ke wagqiba ekubeni akhe indawo encinci yokuhlalisa abathengi bakhe. Wakha isaluni yakhe ecaleni kwendawo ahlala kuyo ngeminyaka yoo-1950 kwaye yayisaziwa njengeSalon. Ndikushiyele imifanekiso emi-2 ukuba uyonwabele, enye iseParagon Beauty Salon noSarah(unemilebe emnyama). Omnye sisihlobo esijingayo kwiveranda engaphambili yendlu yakhe enkulu kunye nezinja kwi-50s. Siye sayilungisa ngokutsha kwaye ngoku ilingana negumbi elinye lokulala kwabo baya kuxakeka ngakumbi kwaye malunga nokonwabela uluntu lwethu ukuze wonwabe.
Eli khaya lizibhlokhi nje ezintathu ukusuka edolophini ngoko ke akukho kuqhuba. Iindawo zokutyela, indawo yokuthengisa utywala, irum distillery, kunye neevenkile zonke zikwidolophu ephakathi ukuze kube lula kuwe. Ukuba uhlala kuLwesihlanu wokuqala enyangeni sino “Lwesihlanu Wokuqala” okufana netheko lebhloko kwidolophu yaseBrunswick.
Ndifumaneka ngokubhalelana okanye ngo-Airbnb ngamaxesha amaninzi emini.